होलिमा सुदूरपश्चिमका २७६ सवारीसाधन कारबाहीमा परे, कति उठ्यो राजस्व ? – Artha Sarokar- Sudurpaschim Edition
होलिमा सुदूरपश्चिमका २७६ सवारीसाधन कारबाहीमा परे, कति उठ्यो राजस्व ?
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होलिको अवधिमा २७६ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन । प्रदेशको ९ वटै जिल्लामा शुक्रबार र शनिबार गरिएको सवारी जाँचमा २७६ सवारीसाधन कारबाहीमा परेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ । कारबाहीमा परेका सवारीसाधनबाट २ लाख ५८ हजार ५ सय राजश्व संकलन भएको छ ।
कारबाहीमा परेका सवारीसाधनमध्ये सबैभन्दा बढी मापसे गरेर मोटरसाइकल चलाएको पाइएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार प्रदेशभर १ सय ३८ सवारीसाधन कारबाही गर्दा ९९ हजार ५ सय राजश्व संकलन भएको हो ।
त्यस्तै शनिबार २ सय ३८ सवारीसाधनबाट १ लाख ५९ हजार राजश्व संकलन भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ । कारबाहीमा परेका सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा रहेका छन ।